Maxaa ka Run ah Hadalka ka Soo Yeedhay Somaliland? – Rasaasa News
Sep 14, 2010 al shabab, conflicts, Eritrea, Somaliland
Masuuliyiin ka tirsan maamul gabaleedka Somaliland oo caawa fiidkii shir jaraa,id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay hadalo aan isqabanaynin, iyaga oo leh ciidamo ONLF ah ayaa ka soo degay xeebaha maamulgabaleedka Somaliland.
Taliyayaasha ciidanka Booliska iyo Milatariga ee Somaliland ayaa sheegay in ciidan ONLF ah ay ka soo dageen xeebta u dhaxaysa Saylac iyo Lughaya, ciidanka ayey tiradooda ku sheegeen 250 ilaa iyo 300. Waxay sheegeen in ay Jamcihii oo ay bishu ahayd Sept 10, 2010 ay ka soo dageen xeebta Somaliland, waxay sheegeen in ay ciidankaasi lugeeyeen ilaa 120 KM.
Waxay taliyeyaashu sheegeen in ciidanka ay arkeen dad reer Miyi, ah balse ayna dawladu maqal mooyee arag cida ay yihiin Somali iyo dad kale. Dhinaca kale taliyeyaashu waxay sheegayaan in ciidanku uu yahay ONLF, Eritrea laga keenay, waxa kaliya ee ay ku cadaynayaana ay tahay lacag Eritrean ah oo laga helay meesha uu ciidanku fadhiistay.
Waxaanu haynaa bay yidhaahdeen taliyeyaashu darawaliintii saddex gaadhi oo qaaday ciidanka iyo laba nin oo uu midi dhaawac yahay oo ka tirsan ciidanka iyo waliba hub badan oo ay ka tageen.
Waxaa isweydiin leh Darawaliinta ciidanka qaaday dhige kase tagee sidee lagu gartay, 2 nin ee mid dhaawaca yahay sidee lagu qabtay haduuna dagaalba dhicin, hubka intaas tiro la egg oo aan xoog lagu furan ciidankii lahaa baa iskaga tagay sidee ayey ku dhici kartaa?
Sida aynu la wada socono labadii sano ee ugu dambaysay ONLF, wax ka dhaca mooyee wax ku soo kordhay ma jirin. ONLF waxaa laggaga adkaaday gudaha Ogadeeniya, ciidankii ONLF iyo taliyeyaashoodii oo dhan marka laga reebo 4 nin [dhabuuke, sheekh deeg, il-bir iyo cabdikarin], oo aan la ogayn meel ay joogaan mooyee.
Dhinaca kale ONLF, waxay u kala go,oday labo, mid ka mid ah labada garab oo ah ka ugu taageerada badan waxaa uu la heshiiyey dawlada dhexe Itobiya, waxaana la filayaa in mustaqbalka dhaw ay saxiixaan heshiis kama dambays ah.
Dawlada Eritrea, way soo caydhisay saraaskiishaii M O Osman [Jwxo-shiil], u joogay Caasmara, waana la xidhay xeradii tababarka ee Muswac. Arintaasna waxaa keenay markii uu Jwxo-shiil, waayey taageero dadweyne, waana mida keentay in uu London fadhiisto, isaga oo aan meel kale uga bixi karin warkiisuna ku ekaaday TV Somali Chanel UK.
Waqooyi galbeed Somaliya [Somaliland]
Somaliland tan iyo intii uu Siiraanyo madaxweynaha noqday waxaa Itobiya soo kala dhaxgalay mad-madow badan oo siyaasadeed xidhiidhkooduna waxaa uu marayaa meel xun.
Xidhiidhka Itobiya iyo Somaliland waxaa uu aad u xumaaday kolkii ay Jabhadaha UWSLF iyo ONLF, qaadateen heshiis nabadeed. Waxaa hore ugu dhaxeeyey Somaliland iyo Itobiya in dib loo mideeyo Somaliland iyo Ogaden [re-unification british somaliland], oo ay noqdaan dalad ay Itobiya xukunto, Barbarana uu ka dhoofo Baatroolka Ogaden. Arintaas waxaa xumeeyey heshiiska nabada ee ONLF ay Itobiya la gaaadhay oo ay Somaliland u qaadatay in ay ONLF Hargeysa xukumidoonto.
Xidhiidhka xumaaday ee Somaliland iyo Itobiya waxaa aad uga naxay siyaasiyiinta iyo dadweynaha reer Somaliland oo ay noloshooda iyo nabadooduba ku xidhan tahay dalweynaha Itobiya. Waxaana saaran Siiraanyo culays uusan qaadi karin oo siyaasadeed, waana suurto gal in uu sameeyo wax kasta oo uu ku soo celin karo xidhiidhka Itobiya.
Waxaa baryahan dambe aad carabka loogu hayey in ay si xoog leh u soo galayaan ciidamo ka tirsan ururka Al shabaab gudaha Somaliland, arintaas oo uu la socdo Siiraanyo, maadaama hogaaminta ururka Al shabaab ay yihiin dad u dhashay gabalada Waqooyi galbeed ee Somaliya [somaliland].
Gabogabadii: Xaqiiq waxaa ah baan isleeyahay in ayna xiligan jirin ciidan ONLF ah, oo gudo iyo dibad midna urursanaantaas leh, marka laga reebo ciidanka nabada qaatay ee jooga Ogadeeniya.
Waxaa kale oo aan iyaduna isqabanaynin sheekada ay dhoodhoobeen saraakiisha Somaliland, oo kolka aad dhagaysatid waraysiga aad dareemi in ayna sheekadu dheeh lahayn. Waxaan isleeyahay todobaadka dambe waxay odhan doonaan saraakiisha Somaliland ciidankii ONLF waxay u gudbeen dhinaca Puntland.
Waxaa suurto gal ah in naf la caarinimada Somaliland ay Itobiya Keenaan dad ay suuqyada ka uruuriyeen oo dhalasho Ogadeen ah. Arintaas oo aan maanta Itobiya ka gadmaynin, uguna wacan tahay nabada dhaxmartay dawlada iyo Jabhadihii hore ula dagaalami jiray.
Waxaa suurto gal ah in ciidanka 300 ah ee ay sheegeen in uu soo galay Somaliland ay yihiin Al shabaab, oo baryahanba la sugayey in ay qas ka abuuridoonaan Somaliland.
Halkan ka dhagayso Saraakiisha Somaliland